Mountain TV || जनकपुर लगायत मधेशभर हर्षोल्लासका साथ जुडशितल पर्व मनाईदै
जनकपुर लगायत मधेशभर हर्षोल्लासका साथ जुडशितल पर्व मनाईदै
Tweet बटुकनाथ झा, २ बैशाख जनकपुरधाम । नयाँ वर्षको सुरुवात सँगै आज जनकपुर लगायत मधेशभर हर्षोल्लासका साथ जुडशितल पर्व मनाईदै छ । जूडशीतलको अर्थ शितलता प्रदान गर्नु हो । यस पर्वमा जेठाले आफूभन्दा सानालाई हत्केलामा पानी लिइ टाउकोमा थुपार्र्दै आर्शिवाद सूचक भावले शितलता प्राप्त होस् भन्ने गर्दछन । मैथिलहरु एकाविहानै उठेर आफ्नो परिवार र गाउँका सकेसम्मका केटाकेटीहरुलाई आर्शिवाद दिदैं जाने गर्दछन । यसमा कोही कसैको विरोधी प्रतिद्धन्दि नभइ एक अर्काको निम्ति शीतलताको कामना गर्दछन् । यो शितलता वास्तवमा सूर्यको कडा ताप विरुद्ध हुन्छन् । नया वर्ष अर्थात वैशाखदेखि सूर्यको तापमा वृद्धि हुदै जाने भएकोले मानव मात्रको कल्याणको लागि नभइ यस पर्वमा रुख, विरुवाहरुको लागि पनि शीतलताको कामना गरिन्छ । विहानै भाडावर्तनमा पानी लिएर चारैतिर लाग्छन् र त्यहां भएका समस्त रुखहरुको जडमा पानी हाल्ने गरिन्छ । नयाँ वर्ष संगे मनाइने जुरसीतल पर्व संगै विक्रम सम्बतको बारेमा बताउनु हुन्छ वरिष्ठ साहित्यकार डा. राजेन्द्र विमल ।
यसैगरि जुडशितलमा बासि भात र मानव शरीरको लागि अति नै स्वस्थ्यकर मानिएको चनाको सतु तथा अन्य चिसो परिकारहरु खाने परम्परा छ । जुडशितलमा एकआपसमा हिलो पानी खन्याउने चलन पनि रहेको छ । विभिन्न जातिय सम्प्रदायमा नयाँ वर्ष मनाउने आफ्नै विशिष्ट शैली हुनेभएकोले मैथिलहरुमा पनि परम्परा देखि नै जुडशितल पर्वको आयोजना गरि मनाउदै आएका हुन् । जुरसितलमा टाउकोमा पानी हाल्ने तथा माटो दल्ने विषयको महत्वका बारेमा भन्नु हुन्छ फेरी वरिष्ठ साहित्यकार डा. राजेन्द्र बिमल ।
हिलो र पानी जिउमा हाल्नाले स्वास्थ्य लाभ हुने र छालाको रोगहरु नलाग्ने वैज्ञानिक कारण रहेको छ भने यो पर्वमा पानी हालेर खेल्यो भने गर्मी महिना भरी शितलता प्रदान हुने जनविश्वास रहेको छ । यसै विश्वासको साथ एक अर्कामाथि पानी र हिलो छयापेर जुड शितल मनाउने गरिन्छ । गर्मी याममा दादुराको प्रकोप बढ्ने गरेको कारण्ँले शुद्ध माटो जिउंमा लगाउँदा यो रोग निको हुने पौरानिक मान्यता अनुसार शुद्ध माटो र पानीले यो पर्व मनाइने गरिन्छ । नगर क्षेत्रमा यस पर्व लोपोन्मुख हुंदै गए पनि अहिले पनि ग्रामिण क्षेत्रमा यस पर्वको बिशेष महत्व रहेको छ । जुडशीतल पर्व कहिले देखी सुरु भएको हो भन्ने कुरा यकिन नभएपनि सूर्यको कडा तापको विरुद्ध मानवलाई शीतलता प्राप्त गर्ने सँंस्कृतिक परम्परा भएकोले निश्चय सूर्य पूजाकै क्रममा सुरु भएको हुनुपर्दछ भन्ने अनुमान गरिन्छ ।